Ilwareed.com » Noocyada Dhaawaca Maskaxda (Types of Brain Injury)
Al-Shabaab oo ku hanjabtay in weeraro ka geysanayo dalalka ciidamada ka jooga Soomalia iyo Daawo sawirro Madaxda Aduunka oo maanta ka qeyb galaya xuska baroor diiqa loo sameynayo Nelson Mandela H.E. Dr. Mohamed Nur Ga’al “ Wadamada Carabta waxa ay qabanayaan Shir dhaqaale loogu yaboohayo Soomaaliya”. “Daawo sawirrada” Jarmalka iyo Masar oo Safiiro cusub u soo magaacabay Soomaaliya Maxkamada Gobolka Banaadir oo xukuntay Suxufiyadii sheegatay in la kufsaday iyo Wariyihii wareystay SOMALI LINKS
November 9, 2012 - Written by ilwareed - Edited byilwareed Lafaha qalfoofku way adag yihiin si ay u ilaaliyaan maskaxda. Marka madaxa lagugu dhufto ama xoog loo dhaqaajiyo, maskaxda dhaawac ayaa gaara markay ku dhaqaaqdo xawaare ka duwan kan qalfoofka. Maskaxda ama qayb maskaxda ka mid ah jug ayaa gaari karta, way kala jiidmi kartaa ama kala dillaaci kartaa si uu dhiig uga yimaado.
Marka ay maskaxdu gadaal iyo horey ugu dhacdo qalfoofka, dareemayaasha maskaxda ayaa kala jiidma ama kala dillaaca. Takhtarkaagu waxaa laga yaabaa inuu ku tilmaamo dhaawac fudud, mid dhexe ama mid daran.
Jugta ama dhaawac jug waxay dhici karaan marka madaxa wax lagu dhufto isla markaana maskaxdu ay gadaal ama horey ugu dhacdo qalfoofka. Dhiig maskaxda gudaha ugu baxa ama dillaac qalfoof ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Jugtu waxay keeni kartaa barar, kooma, suuxdin, waxyeello maskax ama cadaadis sarreeya oo ka dhex dhaca qalfoofka.
• Dhiigga ku urura lakabka sare (Epidural hematoma)—lakabka sare ee maskaxda ee u dhexeeya maskaxda iyo qalfoofka.
• Dhiigga ku urura lakabka dhexe (Subdural) hematoma—lakabka dhexe ee maskaxda.
• Dhiigga ku urura qaybta gudaha ( Intracerebral hematoma)—qoybta gudaha ee maskaxda.
Dhiig Gudaha ugu Baxa Maskaxda